ဂယ်ရီနဗီးစ်ပြောသော ဝက်ဟမ်းနဲ့ပွဲက အမြဲတမ်းခြေစွမ်းမကျတဲ့ သရဲနီများအကြောင်း – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ဝက်ဟမ်း အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၁ – ၃ ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ်အနိုင်ရတဲ့ ပွဲအပြီး မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် မှာ ရာသီအစကနေ ခြေစွမ်း တည်ငြိမ်သော ကစားသမားတွေအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်…
နဗီးစ်က ” ကျနော် ကစားသမားတွေကို မဝေဖန်ချင်ပါဘူး…..ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဲ့ဒီနေရာက တက်လာတာဆိုတော့ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ဒီနေ့ပြောချင်တာက ယူနိက်တက်မှာ ပုံမှန်ခြေစွမ်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကစားသမားတွေကို အိုလေ သိရဲ့လားဆိုတာကို မေးချင်မိတာပါ……
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုပြီးမေးရင် ဝက်ဟမ်းပွဲကိုဘဲကြည့် ပထမတပိုင်းလုံး အသင်းက တော်တော်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်…..အဲ့တော့ အဓိက ကစားသမားတွေကို မသိတာလား နေရာမပေးတတ်တာလား ဗျူဟာဘဲလား မေးချင်မိပါတယ်………
ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေတဲ့ကစားသမားတွေက ဘယ်သူတွေလဲ အရင်ဆုံး ရတ်ဖို့စ် …..သူကတော့ မန်ချက်စတာသူရဲကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် သူဒီခြေစွမ်းကို ထိမ်းထားပါစေလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်…နောက်တယောက်က ဘရူနို ……မန်ယူကွင်းလယ်အသက်ဝင်ဆုံး လက်နက် ပေါ့ သူတို့နှစ်ယောက်မပါရင် ကစားသမားတွေပါ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအားနည်းနေသလိုဘဲ….
နောက်တယောက်တော့ ပေါ့ဘာ သူ့က ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ကစားသမားပါ …သူ့ဟာဘရူနို ပါရင် တော်တော် အတွဲမိမိကစားနိုင်သူပါ ပေါ့ဘာကစားပုံကတော့ အခုထိမြင်ရသလောက် ဘရူနိုနဲ့ အတွဲညီဆုံးပါ…..နောက်ပြီး အဲ့လက်တဲ ကလည်း ဘရူနို ရတ်ဖို့စ်မပါရင် တောင်ပံတိုက်စစ်ကို လိုက်ပါကစားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပွဲဟာတော်တော်ကို အသက်မဲ့သွားစေခဲ့တာကို မြင်ရပါမယ်….
အိုလေအနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲရှိလို့ဆိုပြီး ကစားသမားတွေကို အနားပေးတာ မှန်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ပွဲတိုင်း ဝက်ဟမ်းကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲတုန်းကလို လူစားလဲမှုတွေကို လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်….ဝီန်းရွန်းနီကို ကြည့်ပါ သူဟာ တရာသီလုံးနားရက်မရှိတဲ့ မန်ယူ ဂန္တဝင်ကစားသမား ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ကိုပြောချင်ပါတယ်…ဆိုပြီး MEN News မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်…